Maxaa suurageliyay in dowladdu $42 M ku soo xareyso muddo 3 bilood ah ? – Kalfadhi
Miisaaniyadda dowladda ee sanadkan 2018-ka waa inka badan 274 milyan oo doolar. 156 milyan oo kamid ah miisaaniyadda waxaa lagu tala galayaa in laga soo xareeyo dakhliga dowladda ee gudaha oo ka dhigan canshuuraha kala duwan halka 118 milyan laga filayo dalalka deeq bixiyayaasha.
Sida uu shaaciyay Midowga Yurub, dowladda Soomaaliya waxay soo xareysay dakhli dhan 42.5 milyan oo doolar seddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan iyada oo kaashanaysa canshuuraha dalka oo la hagaajiyay.
Waxay dowladdu fileysay seddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan dakhli dhan 39 milyan, taa macnaheedu waa in uu jiro koror dhan 3.5 milyan oo doolar.
Ururka midowga Yurub waa uu ammaanay kororka dakhliga isaga oo ku ku tilmaamay dakhligii ugu badnaa oo dowlad Soomaaliyeed ku soo xareyso muddo seddex bilood ah tan iyo sanadkii 1990-kii. Isha ugu badan ee dakhligan uu ka yimid waa dekadda Muqdisho.
Taariikhda deymaha lagu leeyahay Soomaaliya
Deymaha Soomaaliya lagu leeyahay oo isu dhaafay sanadba sanadka ka danbeeya tan iyo burburkii dalka ayaa hadda ka badan 5 bilyan oo doolar. Inta badan deymaha waxaa Soomaaliya ku leh dalalka ku jira ururada Paris Club iyo Non-Paris Club.
Yaxye Caamir oo ah dhaqaaleyahan lana soo shaqeeyay bankiga adduunka ayaa Kalfadhi u sheegay in deymaha yihiin kuwa ay qaateen dowladihii hore, wuxuuna xusay in dulsaarka lacagta uu ku socday Soomaaliya tan iyo qaadashada deymaha.
“ Waxaa laga yaabaa inaan qabno afar meelood meel deynta, laakiin haddii aadan iska bixin, mararka qaar dulsaarku wuxuu ka badanayaa deynta,” ayuu yiri Yaxye.
Yaxye oo sii hadlay waxa uu sheegay in mararka qaar la isku rakaateeyo deymaha, waxa uu shaaciyay in dowlad deymeysan aysan si xur ah u dhiiban karin codkeeda marka la joogo fagaarayaasha caalamka.
Muxuu Kororka dakhliga ka badalayaa deymaha Soomaaliya ?
Dhakhliga dowladda soo xareysay waxaa sidoo kale ammaanay hay’adda lacagta adduunka oo dowladda Soomaaliya kala shaqeynaysa hannaankii looga cafin lahaa deymaha.
Wafdi dowladda Soomaaliya ka socda oo uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa magaalada Washington kula kulmay madaxda hay’adda lacagta adduunka oo ay kala hadleen cafinta deymaha Soomaaliya.
Mr Beyle ayaa xusay in tubtii loo baahnaa ay ku dhaceen islamarkaana ay ku taagan yihiin si loo aamino Soomaaliya loogana saaro liiska dalalka ku caan baxay musuqa.
Laba tijaabo ayay dowladdu ka gudubtay, waxaana hadda socota tijaabadii 3aad sida uu tilmaamay wasiir Beyle.
“12-ka bilood ee soo socota, waxa aan la saxiixanay ( IMF), haddaan ka soo baxno, waa nagala dhaafayaa deynta,” ayuu yiri wasiir Beyle.
Yaxye Caamir oo aan weydiinay sida ay wax u qiimeeyaan hay’adaha maaliyadda caalamiga ah, waxa uu daaha ka qaaday in maamul wanaagga, la dagaalanka musuqa iyo habka loo qaado canshuuraha ay saldhig u yihiin cafinta deymaha.
“ Kororka dakhliga kama dhigna deynta lagu bixinayaa, ee waa inaad tahay dowlad la aamini karo oo dadaaleysa,” ayuu yiri Yaxye.
Waxa uu intaa raaciyay Yaxye in su’aashu tahay halkee lagu bixinayaa dakhliga kordhay, ma mushaar, ma mashruuc cusub mise safarro.
Cabdisalaan Cabdulaahi Maxamed oo 3-dii biloodba laga qaado canshuurta gaadiidka ayaa u sheegay Kalfadhi in kororka dakhliga uu mudan yahay ammaan laakiin waxa uu yiri waa in dadka bixiyay canshuurta dib loogu soo celiyaa oo loogu sameeyaa mashaariic.
W.D; Mahad Mohamed Ali
Wasiiru dowlaha wasaarada ganacsiga oo xilkasi iska casilay si uu ugu tartamo xilka afhayeenka golaha shacabka